Akụkọ - 2020 bụ afọ na-amị mkpụrụ maka Stamina, kedu ka ọ siri dị
Anyị mechara nnukwu ọrụ ahụ site na Australia n'oge, ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ mgbakọ ha ugbu a. Ha weputara anyi oru ohuru dika nkea n’enweghi obi abua otutu ubochi gara aga, ha ajujughi ajuju obula gbasara anyi, tuoro anyi ihe osise ahu. Ọ bụkwa drum, ma ọkara sịlịnda, ọ toro ogologo. Ndị injinia anyị ka na-eme nyocha miri emi na eserese ahụ, mgbe ha mere nke a, ha kwesịrị ichefu ọrụ niile gara aga, iji zere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ọ bụla. Mgbe anyị tụlechara n'etiti ngalaba ndị ikwu niile, anyị kpebiri ịmechaa ọrụ a n'ime ọnwa abụọ.
N'otu oge ahụ, ngwaahịa ndị ọzọ anyị maka ndị ahịa Germany na USA agwụla ma zipụ n'oge, niile natara ezigbo nzaghachi.
Mmepụta anyị nwere ihe karịrị 200% na-ebili ọdịiche na afọ gara aga, na-enweghị nsogbu mma ma ọlị.
Anyị n'ọtụtụ na-abawanye nzọụkwụ site nzọụkwụ, were ụfọdụ ndị ọzọ ọrụ na technicians, ịgbaziri agbaziri otu ọzọ nnukwu omumuihe.
Anyị na-zụtara a nnukwu lathe igwe, nwere ike igwe dayameta ruo 1200mm, ogologo ruo 6m.
Ihe anyị rụpụtara dọtakwara ndị ọchịchị ime obodo ahụ. Ọchịchị Yantai FTZ nwere oke ọrụ, ngalaba niile nwere oke arụmọrụ. Ngalaba ndị ikwu bịara ọtụtụ oge itinye ego na ọnọdụ anyị, gbalịa inyere anyị aka inwekwu ọganihu. Anyị nwere ekele dị ukwuu.
Onye nlekọta anyị GM Jerry nwere nzukọ maka ndị ọrụ niile, webata ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ, na-ekele ndị ọrụ ọ bụla, na-atụ aro atụmatụ anyị n'ọdịnihu, wee kpebie ịnye ndị ọrụ ahụ ọtụtụ uru. Jerry na-ewebata ozi Stamina ọzọ. Stamina kwesịrị ịrụ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ nwere ọrụ, na-ahụ maka gburugburu ebe obibi, na-ahụ maka ọha mmadụ, na-ahụ maka ndị ọrụ.
Ugbu a, anyị na-ebupụta ala etinye ego na iwu ụlọ ọrụ nke anyị.
Olileanya na Stamina nwere a ọzọ amamiihe echi!